DAAWO: Wararkii ugu dambeeyey Dagaalka Ceel-Afweyn Iyo Dhimashada.
CEEL-AFWEYN(P-TIMES) – Iska horimaad geystay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacay deegaanka Ceel-AFweyn ee gobalka Sanaag oo ay ku dagaalameen labo maleeshiyo beeled oo deegaankaas mudo dheer ku dagaalamayay, marar badana heshiis la dhex-dhigay.
Wararku waxay sheegayan in dadka dhintay ay gaarayaan 5 qof oo ay ku jiraan labo haween ah, markii ay dabley hubeysan rasaas ku fureen goob ay kusugnaayeen dad kala duwan, waxaana sidaas oo kale ciidamada Ammaanku ay rasaas ku rideen dad shacab ah.
Ciidamada Ammaanka ee Somaliland ayaa dadaal badan-galiyey sidii dhacdadan loo xakameyn lahaa, balse cabsida ay qabaan dadka deegaanka ayaa ah in dagaalo cusub ay dhacaan.
Somaliland, ayaa ciidamo badan geysay deegaankaas, balse gobalka Sanaag waxaa kajira rabshado kusaleysan xaga tabashada oo ay qabaan beelaha qaarkood, taas oo sababtay in ay dhacaan dagaalo hubeysan oo xukuuamdda lagu eedeynayo.
Beelahan dagaalamaya ayaa marar badan heshiis gaaray, balse mar kasta ma muuqato in ay fuleen, maadaama ay sii socota falalka is leynta ee labada beelood dhexmaraya, waxaana masuuliyiinta mucaaradku ay ku eedeeyaan dawladdu in ay ka dambeyso arrimahaas.